नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट १५ जनाको मृत्यु(विरवरणसहित) - Nepal Readers
नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट १५ जनाको मृत्यु(विरवरणसहित)
नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हालसम्म १५ जनाको मृत्यु भएको छ । मृतकमध्ये १२ पुरुष र ३ महिला छन् ।
हिजो थप एक जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार मृतक भरतपुर महानगरपालिका वडा ११ का हुन् ।
उनलाई निमोनिया संक्रमित भएको २६ जेठमा पुष्टि भएको थियो । निमोनिया संक्रमित उनको उपचारका क्रममा निधन भएको हो ।
यसैगरी, २६ जेठमास्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका घर भएका ५८ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको थियो । उनको मृत्यु पश्चात नमुना परीक्षणका क्रममा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
पञ्चपुरी नगरपालिका १ हाँसे घर भएका उनको त्यतिबेला परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आएपछि २२ जेठमा घर गएकामा त्यहीं मृत्यु भएको थियो । युवकको परीक्षणबाट पोजेटिभ आएको पुष्टि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले गरेका छन्।